Gorodona vy voritra avo - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Gorodona vy voritra avo
Ahitsio: Denny　2019-12-04　Mobile
Ny gorodona vinyl avo lenta (LVF) dia fehezanteny vaovao izay mirakotra tsipika vita amin'ny vinyl fika avo lenta (LVT) ary valiny vita amin'ny vinyl avo lenta (LVP). Ny safidy ny sokajy mifanandrify dia maneho ny fomba fiasa hafa isan-karazany.Ny olona sasany dia tia ny faritry ny vatosokay na ny marbra amin'ny gorodona LVT, ary misy ny olona toa ny ebony Papua na volontany tropikaly amin'ny gorodona LVP. Ny fikojakojana sy ny vidiny mora.
Ny mpikaroka amin'ny arisialy sy ny manam-pahaizana amin'ny fananganana dia mpankafy amin'ny gorodona LVT. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fitadiavana dizitaly sy ny teknolojia fanamboarana mahafinaritra, ny habetsaky ny loko vita amin'ny vato hanahafana na hazo matevina vita amin'ny hazo avo dia mety hahatratra ny voka-dàlana tena izy, ka tsy misy manam-pahaizana mahay manavaka azy ireo amin'ny tany na hazo vita amin'ny hazo.
Araka ny filazan'ny World Association of Floor Paving Materials, ny fahaizana mamerina ny hazo mafy sy ny vato amin'ny fampiasana teknika mandroso mandroso dia fepetra takiana amin'ny rafi-panafihana vinyl avo lenta. Apetraka samy hafa efatra dia natambatra mba hanaovana vokatra farany, izay ho takelaka fanohanana vinyl elastika, ravina hosodoko vinyl, sosona sarimihetsika, ary takelaka vita amin'ny polyurethane na alumina. Ny sosona miaro tena ambony (fantatra ihany koa ny abrasion resistant layer na mil layer) dia zava-dehibe tokoa amin'ny faharetan'ny vokatra.Ireo vokatra ireo kalitao avo lenta aza dia manana layer matevina mahatratra hatramin'ny 40 tapitrisa matevina. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra maro izay nahavita ny fampiharana ara-barotra dia nahomby tamin'ny famolavolana lamba vita amin'ny 20 mil na maromaro. (Fanamarihana: Mill dia antsoina hoe milli-inch, 1 mil = 25.4 microns)
Avy amin'ny fomba fijerin'ny fiantraikany optika sy hita maso, ny hazo milina fanandramana vita amin'ny vinyl avo sy ny valin'ny fananganana vinyl avo lenta dia afaka manahaka vato voajanahary, karazana kirihitra sy kiraro vita amin'ny tile rehetra, izay tsy isalasalana fa mifanentana amin'ny filàna zava-misy azo ampiharina isan-karazany amin'ny fiainana ankehitriny. Fa raha oharina amin'ny endriny maoderina sy avant-garde, ny gorodona vovony avo dia avo ihany koa, mora ampiasaina ary mora ampiasaina. Noho izany antony izany dia azo jerena izy ireo na aiza na aiza, manomboka any an-tranon'ireo tantsaha ao ambadiky ny tokotaniny mankany amin'ny trano manankarena ao amin'ny tanàna lamaody.
Gorodona vy voritra avo Ny atiny mifandraika
Hitanay fa be dia be ny olona mitady ny gorodona ao an-dakozia. Mila endrika modely, retro, mainty sy fotsy alàlan'ny loko ny loko, loko mainty sy fotsy, navy manga sy fotsy Checkerboard, mainty sy f...